Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaalle Geelle Xaaf [Bidix] iyo Madaxweyne Farmaajo [Midig]
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay is-fahamka ay gaareen dhinacyada Galmudug oo maalmahan u joogay magaalada Muqdisho xal u helista khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jiray.
Madaxweynaha ayaa yiri "Keddib wada-tashiyo aan la yeeshay dhinacyada ay khuseyso dib-u-heshiisiinta Galmudug, waxaan xalay ka gaarnay natiijo wax ku ool ah oo u adeegeeysa danta guud, taas oo ku timid isu-tanaasul iyo is-qancin."
"Waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan madaxda Galmudug sida xilkasnimada leh ee ay u soo dhaweeyeen qorshihii aanu hordhignay kaas oo uu aasaas u yahay dhaqan-gelinta heshiiskii ka koobnaa 14ka qodob ee ay kula saxiixdeen Villa Soomaaliya 6dii Diseembar, 2017."
Khilaafka cusub ee madaxda Galmudug ayaa salka ku haya hanaanka loo marayo heshiiskii awood qeybsiga ee uu kula galay Jabuuti December 2017, kaasi oo labada maamul ku qeybsanayaan xubna gollaha wasiirada iyo Baarlamaanka.
Madaxweyne Xaaf ayaa lagu eedeeyay inuu jebiyay qodobo kamid ah dastuurka, islamarkaana uu sameystay mudo korarsi aan sharci ahayn, sida ay sheegeen Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.